Agate geode - cryptocrystalline quartstalline quartz - video
Kedu ihe dị oké ọnụ ahịa dị oké ọnụ ahịa na ọkara dị oké ọnụ ahịa?
Kedu otu esi atụle uru nke nkume?
Ndi kristal na-agwọ ọrịa ọ na-arụ ọrụ n'ezie?
Mkpụrụ mineral dị egwu?
Gini bu ihe omuma ihe omuma?
Kedu ka a ga-esi gbapụ site n'ịzụta nkume?
Kedu ihe bụ onye na-enyocha ihe omimi?
Kedu ihe bụ birthstones?
Kedu ihe ọla platinum pụtara na Cambodia?
Kedu njikọ ụda aka?
Gịnị bụ Siem Reap?
Gem Ndepụta Nkọwa
Tags Agate, geode
Agate bụ nkume nke na-abụkarị nke cryctocrystalline silica, chalcedony bụ isi, na-agbanwe na quartz crystalline. A na-ahụ ya site na njedebe nke ọka na ọtụtụ agba. Ọ bụ ezie na anyị hụrụ na agates na dị iche iche nke ndị ọbịa na nkume. Anyị na-achọta ya na nkume mgbawa. Ọ pụkwara ịdị na nkume dị iche iche.
Ọtụtụ agates na-eme dị ka nodules na nkume mgbawa ma ọ bụ n'oge ochie. Na cavities mbụ mepụtara site na volatiles na mbụ molten uka. E mechara jupụta, ma n'ụzọ zuru oke ma ọ bụ n'ụzọ ụfọdụ, site na ihe dị ọcha. N'elu n'osisi nile n'elu mgbidi. Agate nwekwara ike jupụta veins ma ọ bụ mgbawa, na nkume mgbawa ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe nke ndị mmadụ na-eme ka ndị mmadụ ghara ịbanye. Ụdị agafe ahụ, mgbe a na-egbu ya n'ụzọ dị iche, na-egosi ụdị ihe yiri ya. Ọ na-abụkarị nke oke ókè. Ọ na-enye ọhụụ ịga na ngalaba. A na-eji nkume ndị ahụ akpọrọ ihe, na-ejikarị agate na agate.
N'ihe e guzobere agate, ọ ga-abụ na mmiri nwere silica na ngwọta e nwetara. Ikekwe, site na mbido ụfọdụ n'ime silicates ahụ n'onwe ya. Ọ na-agafe na nkume ahụ ma debe gel siliceous n'ime ime nke vesicles. Ọdịiche dị na njirimara nke ngwọta ma ọ bụ na ọnọdụ nke iwepụta. O nwere ike ime ka mgbanwe dịgasị iche na ọkwa ndị ọzọ. Ya mere, agbụrụ chalcedony na-ejikọtakarị na ọkwa nke quartz crystalline.
Geodes bụ ihe ndị na-esite na mbara igwe nke na-eme na ụfọdụ nkume na-efe efe na ugwu mgbawa. Ha bụ ndị sitere na mmiri sedimentary ma na-emekarị site na mmiri ozuzo. Geodes nwere oghere, spheroid na-adịghị mma iji kpochapụ ọtụtụ okwu ịnweta. O nwere ike ịgụnye kristal. Ọ na-emepụta ma ọ bụrụ site na njupụta nke vesicles na ugwu mgbaba na n'okpuru ugwu mgbawa site na mineral edebe. Site na hydrothermal fluids ma ọ bụ site na mgbasa nke nne nke nodules ma ọ bụ syngenetic concretions. Na nlezianya juputara na otu ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. A na-ebute ya site na mmiri diagenetic, nakwa mmiri mmiri ma ọ bụ mmiri hydrothermal.
Ọdịiche dị iche iche dị iche iche dị iche iche. Ụdị ya na-abịa n'isi ụtụtụ. Ha na-ewu n'ime nkume gbara gburugburu. Geodes dị iche na nodules. Nodule bụ ihe na-eme ka ịnweta ihe na-agbapụta gburugburu na nodule nucleus. Ulo abụọ ahu nwere ihe ndi ozo nke di n'ime, nke e debere site n'ala mmiri ma o bu usoro hydrothermal
zụta ezigbo nkume dị na ụlọ ahịa anyị
Gemstones yiri ya
Tags Agate, chalcedony, Mkpụrụ vaịn
Tags Agate, akpaetu
Tags Agate, Blue
Home | Kpọtụrụ anyị
njehie: Ọdịnaya a na-echebe !!